ओलीको एउटै बोलीले सम्मान लिने दिने दुवैलाई लज्जीत बनायो – GALAXY
ओलीको एउटै बोलीले सम्मान लिने दिने दुवैलाई लज्जीत बनायो
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले परमादेश बाट बनेको देउवा सरकारले आज संविधान दिवसका अवसरमा बाँढेको विभिन्न मान सम्मान तथा पदकहरु बारे कडा टिप्पणी गरेका छन् ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले प्रदान गरेको विभूषणका विषयमा आक्रोश पोखेका छन् । अक्रोसति रुपमा प्रस्तुत भएका ओलीले यस्तो सम्मान बाँढ्नु भन्दा त बरु बाटोमै फालिदिएको भए हुन्थ्यो सम्म भनेका छन् ।
“आफ्नाहरूका लागि बाँड्नका निम्ति डाडुपन्युँ समातेका रहेछन्,” उनले भने, “किन राष्ट्रपतिबाट बाँडिरहनुपर्‍यो मानपदवी ? बनिरहेकै ठाउँबाट लैजाऊ,” उनले भने ।सरकारले पदक वितरणप्रति व्यंग गरेका छन । एमालेले संविधान दिवस एवं राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले आज बाउको वा श्रीमतीको मुख हर्ने दिन हो ? भन्दै व्यंग्य गरे ।
सरकारले आजै माधव नेपालका स्वर्गीय पिता मंगल उपाध्याय र प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाल लगायलाई विभूषण दिने घोषणा गरेको छ । ओलीले विगतमा आफ्नो सरकारको विरुद्धमा लाग्नेहरुलाई छानीछानी पदक दिने निर्णय भएको बताए ।
तर सरकारले कसैको बा त कसैका श्रीमतीलाई मानपदवी दिएको भन्दै उनले भने, ‘आज बाबुको मुख हेर्ने दिन हो ? श्रीमीतीको मुख हेर्ने दिन हो रु छोराछोरीको मुख हेर्ने दिन हो ?
बाहिर म पदको भोको होइन, जनताका लागि हुँ भन्नेहरुले मौका पाउँदा आफ्नालाई मात्र हेरेको उनले बताए । ओलीले अघि भने, ‘अलंकार, पदक, विभूषणहरुको नाकमा कालो पोतेको । ती विभुषणहरुले लज्जा मानेको हेर्नुस् त ।’उनले अघि भने, ‘लजाइ राखका छन् आज मानपदवीहरु । क्या घाँटीमा पुगिने भयो बा ! बोल्न सक्ने भए उफ्रिन्थे ती । तर बोल्न सक्दैनन् ।’
आफ्नो सरकारविरुद्ध खोइरो खन्ने पत्रकारहरुलाई ठूलठूला पदक दिएको उनले बताए । ‘झगडियाहरु सम्मानित, तथानाम बहस गर्नेहरु सम्मानित, जे पायो त्यही बोल्नेहरु सम्मानित, २र४ जना छुटेको जस्तो लाग्यो, किन छोडेको होला रु’ ओलीले अघि भने, ‘मुद्दा जिताइदिने, हराइदिने सम्मानित ।’यो सबैका लागि लज्जाजनक भएको र यसको इतिहासले निर्मम मूल्यांकन गर्ने उनले बताए ।